Golaha Wasiirada Soomaaliya oo Ansixiyey heshiishkii “Coutonu”, una Gudbinaya Baarlamaanka si loo meelmariyo
Warsaxaafadeed ka soo baxay kulankii Golaha Wasiirada DFS ayaa tibaaxay "golaha ay ansixiyeen heshiishka “Coutonu” oo ay Soomaaliya dhowaan saxiixday, waxaana qorshuhu yahay in xukuumaddu ay dhowaan heshiishkan u gudbiso baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya si uu u meelmariyo."
Waxa kale oo Golahu ansixiyeen magcaabista 5 safiir oo cusub oo loo kala magacaabay Talyaaniga, Itoobiya, Belgium & Midowga Yurub, Malaysiya iyo Tansaaniya. Warsaxaafadeedka oo dhan hoos ka akhri:
Golaha Wasiiradda ayaa shirkoodii maanta ku ansixiyey magacaabist safiiro cusub
Muqdisho, June, 20, 2013… Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa,uuna shir guddoominayey Ra’iisul Wasaare mudane Cabdi faarax Shirdoon (Saacid) ayaa meelmariyey magcaabista 5 safiir oo cusub.
Raiisul Wasaaraha ayaa magcaabista safiirada ku tilmaamay in ay ka mid tahay qorshaha xukuumaddiisa ee xoojinta xiriirka diblumaasiyadeed ee Soomaaliya la leedahay caalamka.
“Tallaabadan waxa ay ka mid tahay qorshaha xukuumadda ee lagu adkaynayo xiriirka diblamaasiyadeed ee aynu la leenahay caalamka iyo dardargelinta shaqada ergada diblamaasiyadeed ee Soomaaliya u joogta dalalka caalamka” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaruhu.
Safiirada la ansixiyey magacaabitaankooda waxay kala yihiin: Gen. Muuse Xasan Cabdulle, daniraha Soomaaliya ee dalka Talyaaniga. Axmed Cabdisalaam Aadan, danjiraha Soomaaliya ee dalka Itoobiya. Cali Saciid Faqi Danjiraha Soomaaliya ee dalka Belgaum iyo Midowga Yurub. Nuur Faarah Xirsi, danjiraha Soomaaliya ee dalka Malaysia, iyo Saciid Nuur Yuusuf oo horey u ahaa danjirihii Soomaaliya u fadhiyay Itoobiya oo loo wareejiyay dalka Tansaaniya.
Golaha wasiiradda ayaa sidoo kale ka dooday ammaanka dalka,waxana warbixin laga dhegeystay Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed iyadoo Wasiirku uu sharraxaad ka bixiyey weerarkii argagaxisanimo ee shalay lagu qaaday dhismihii hay’adda UNDP ee magaalada Muqdisho. Goluhu si buuxda ayuu u dhaleeceeyay falkaas argagixiso.
Golaha Wasiiradda ayaa sidoo kale ka dooday kor-u-qaadista heerka nolosha ee ciidamada Qaranka, wuxuuna goluhu boogaadiyey kaalinta ciidamada qalabka sida ee ku aadan suggidda ammaanka dalka iyo la-dagaalanka cadawga lidka ku ah qaranka Soomaaliya. Wuxuu goluhu garawsaday in loo baahan yahay in kor loo qaado heerka nololeed ee ciidamada iyo qoysaskooda, iyadoo arrintaasi loo xilsaaray in ay khamiista soo socota talo ka keenan wasaaradaha kala ah, arrimaha gudaha, gaashaandhiga, maaliyadda iyo horumarinta addeega bulshada.
Ugu dameyntiina, golaha ayaa ansixiyey heshiishka “Coutonu” oo ay Soomaaliya dhowaan saxiixday, waxaana qorshuhu yahay in xukuumaddu ay dhowaan heshiishkan u gudbiso baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya si uu u meelmariyo. Heshiishka Coutonu ayaa fursad u siiya dalalka saboolka ah in ay helaan deeqo toos ah iyo in laga dhimo lacagaha casnhuuraha ah ee ku waajiba.
Ra’iisul Wasaaraha oo guddi heer qaran u magcaabay xuska munaasabadaha 26ka Juun iyo 1da luuliyo
Muqdisho. Juun 20, 2013… Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa wareegto uu maanta ka soo saaray xafiiskiisa ku magcaabay guddi heer qaran oo loo xirsaaray qabanqaabada xuska maalmaha xorriyadda ee 26ka Juun iyo 1da luuliyo.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa wareegtadiisa ku sheegay in uu guddigan magcaabay isagoo tixgelinaya mudnaanta ay leedahay sannad-guurada 53aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay ka xoroobeen gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga sannadkii 1960kii.
Guddiga uu Ra’iisul Wasaaruhu u magcaabay qabanqaabada xuska maalmaha qiimaha weyn ugu fadhiya ummada Soomaaliyeed ayaa ka kooban sided (8) xubnood oo kala ah:-
1.Cabdikariim Xuseen Guuleed, Wasiirka arrimaha gudaha, Guddoomiye
2.Cabdixakiim Maxamuud Fiqi, Wasiirka Gaashaandhigga…… Gud-ku-xigeen
3.Xasan Maxamed Jimccaale, Wasiir ku-xigeenka Garsoorka, Xubin
4.Cabdi Shakuur Cali Mire, Wasiir ku-xgeenka Warfaafinta, Xubin
5.Maxamuud Macalim Yaxye, Wasiir ku-xigeenka W.Horumarinta adeegga, Xubin
6.Maxamuud Axmed Nur, Duqa magaalada Muqdisho, Xubin
7.Maxamuud Xirsi Cabdlle, Xog-hayaha Joogtada ah ee Xafiiska R/W, Xubin
8.Cali Cabdi Wardheere, Xafiiska Arrimaha Bulshada ee R/W, Xubin
Guddigan heerka qaran ee uu Ra’iisul Wasaaruhu u magcaabay qabanqaabada xuska munaasabadaha maalmaha xorriyadda Soomaaliya, ayaa shaqadiisu tahay in uu qaban qaabiyo xuska, xiriiriyo hay’adaha ku hawlan xuska ciidahaasi qaran iyo in ay ka hawl-galaan sugidda amniga iyo habsami-u-socodka munaasabadaha xorriyadda ee dalka Soomaaliya.
Sawirada Halkaan ka daalaco
Gudoomiye ku xigeenka Koobaad ee golaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Jeeylaani Nuur Iikar oo wafdi uu hogaaminayo ay magaalada Brussels ee xarunta Midowga Yurub ay ku joogaan socdaal shaqo ayaa booqasho ku tagay xarunta Baarlamaanka dalka Belgium.
Booqashadan ayaa waxaa Gudoomiye ku xigeenka Koobaad ee Baarlamaanka iyo wafdigiisa ku wehliyey safiirka Soomaaliya u fadhiya Midowga Yurub iyo Dalka Talyaaniga Danjire Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) waxaana ay soo indha indheeyeen dhammaanba qeybaha kala duwan ee uu ka koobanyahay dhismaha xarunta Baarlamaanka dalka Belgium.
Xarunta Baarlamaanka waxaa kusoo dhaweeyey Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Wafdigiisa Gudoomiyaha Baarlamaanka dalka Belgium Hon. Sabine De Bethune oo sidoo kale ay kulan wada qaateen wafdiga uu hogaaminayo Mudane Jeeylaani Nuur Iikar Gudoomiye ku xigeenka Koobaad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Kulankan oo ka dhacay xarunta Baarlamaanka Dalka Belgium ayaa waxaa labada dhinac ay uga wada hadleen sidii ay iskaashi iyo wada shaqeyn joogta ah u yeelan lahaayeen labada Baarlamaan ee Soomaaliya iyo Belgium taasi oo labada dhinac ay isku raaceen abuurista jawi wada shaqeyn iyo iskaashi joogta ah oo ay yeeshaan labada Baarlamaan.
Wafdigan ka socda Baarlamaanka Soomaaliya ee uu hogaaminayo Gudoomiye ku xigeenka Koobaad ee Baarlamaanka ayaa magaalada Brussels uga qeybgalay shirka ACP-EU kaasi oo mudo 20 sano ka badan aanay Baarlamaanka Soomaaliya wafdi ka socda ka qeybgalin.